Bokikely an-tserasera, maodely brochure 30 MAIMAIMPOANA ho an'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
Ianao tadiavina triptych an-tserasera? Ny sarin'ny orinasa dia mihoatra lavitra noho ny sary famantarana na marika. Ny toetran'ny orinasa iray dia miorina amin'ny alàlan'ny loharanom-pifandraisana isan-karazany ary miovaova eto ny maro karazana. Ny iray amin'izy ireo dia ny fomba fampisehoana ireo vokatra sy serivisin'ny orinasa. Androany dia misy paikady marobe handresena lahatra sy hampahafantarana ny mpanjifa, ny sasany mahomby kokoa noho ny hafa.
Na dia misy endrika sy fanohanana marobe aza ankehitriny, ny marina dia ny iray amin'ny fomba nentim-paharazana dia mbola iray amin'ireo mahomby indrindra. Brochure no mahomby indrindra satria izy ireo dia manambatra ny fampahalalana sy ny estetika amin'ny vahaolana ara-toekarena be amin'ny resaka habaka. Ao anaty triptych dia azontsika atao ny mampiditra ireo singa ilaina rehetra handefasana ny tolotra sy serivisinay ary koa ny mombamomba ny fifandraisana sy ny orinasa mihitsy, noho izany, manantena izahay fa ny fisafidiananay ireo triptych an-tserasera dia ilaina hanatsarana ny fifanakalozana orinasanao.
1 Ahoana ny fomba hanaovana brochure
2 Sakafo ara-pahasalamana sy fomba fiaina mahasalama
4 Flyer orinasa ho an'ny orinasa
5 Flyer orinasa ho an'ny orinasa
6 Flyer orinasa ho an'ny orinasa
7 Flyer orinasa ho an'ny orinasa
8 Flyer orinasa ho an'ny orinasa
9 Flyer orinasa ho an'ny orinasa
10 Katalaogy amin'ny akanjo
11 Brochure Trifold ho an'ny orinasa
12 Brochure bi-fold ho an'ny fiara
13 Brochure an'ny orinasa diptych
14 Brochure fandraharahana volondavenona
15 Brochure aloha sy aoriana
16 Bokikely fampiasa am-po roa heny
17 Bokikely fampiasa am-po roa heny
18 Modely flyer orinasa
19 Bokikely fitsangatsanganana
20 Bokikely mahafinaritra
21 Brochure Shidler Trifold
22 Brochure Flyer an'ny trano fisakafoanana
23 Modely amin'ny sakafo fisakafoanana
24 Bokikely efatra pejy
25 PSD Flyer maimaim-poana
26 Brochure Tri-fold
27 Brochure PSD ho an'ny Flyers
28 Flyer trano fisakafoanana style rustic
29 Fitaovana fampisehoana
30 Brochure trano fisakafoanana antitra
31 Brochure menio mahazatra
Aseho an'izany ny fampahalalana amin'ny endrika sary dia manintona kokoa noho ny fampahalalana an-tsoratra Noho izany, ny fiarahantsika amin'ireo bokikely sarintsika sy karazana loharanom-pahalalana sary rehetra dia afaka manome antsika fahitana fanampiny sy fahombiazana. Amin'ny faran'ny andro, ny momba azy io dia ny misarika ny sain'ny mpanjifa mety ary hanao ny fizotran'ny famakiana zavatra mahafinaritra sy mahafinaritra kokoa. Ho fanampin'ny fanatontosana hetsika eo noho eo toy ny fividianana vokatra na fanofana serivisy, raha mahavita manentana ny fihetsem-po amin'ny mpamaky isika dia mety hahatadidy antsika kokoa izy ireo ary te hitodika any aoriana. Ny vahaolana mety indrindra dia hampifandanja ny fahaiza-mamaky, ny fomba, ny toekarena ary ny fanehoan-kevitra.
Ohatra 30 amin'ny Brochure Hotely
Bokikely tsara tsy maintsy misy loko miloko ao amin'ny orinasa ihany koaMazava ho azy, ny sary famantarana sy ny fomba fanoratana ny ao anatiny dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny filôzôfia sy ny toetran'ny orinasa ihany koa. Mikasika izany, ny kabary an-tsary dia tsy maintsy mifanaraka sy ampifanarahana amin'ny mpivarotra na amin'ny serivisy serivisy izay dokam-barotra sy amin'ny mpanjifa izay mandray azy.
Mazava ho azy fa tsy ny tetik'asa rehetra dia mitovy làlana na fironana. Midika izany fa tsy ny zavatra rehetra amidintsika amin'ireto loharanom-pahalalana ireto dia ny vokatra na ny serivisinay, fa ny zavatra amidinay amin'ny faran'ny andro dia traikefa sy karazana fihetseham-po izay tsy maintsy taratra tanteraka. amin'ny fananganana sary. Misy ireo orinasa mila mivarotra ny famoronana, ankoatry ny zavatra hafa, mila ny mpanjifany izy ireo hampifandray ny serivisiny sy ny mombamomba azy amin'ny foto-kevitry ny originality.
Raha ny lojika amin'ireto tranga ireto, ny fananganana ireo singa dokam-barotra rehetra sy ny sarin'ny orinasa dia tsy maintsy ho fetsy, mandinika ary voadio kokoa. Avy eto dia misy zavatra tiako hamafisina: Isaky ny azo atao dia tokony hiezaka hampiasa matihanina amin'ny famolavolana isikana saryphico mandray an-tanana an'io asa io izy ireo ary mametraka ny traikefany sy ny fahalalany ho an'ny fanompoana ny maha-izy anao. Na dia eo amin'ny Internet aza ianao dia afaka mahita loharanom-pahalalana maimaim-poana izay manomboka amin'ny modely ka hatrany amin'ny vector na singa tsy miankina, raha tsy hainay ny manambatra azy ireo sy manome azy ireo feo mifanaraka amin'ny paikadim-pifandraisana manerantany, dia hahazo fifandirana sy valiny tsy mahazatra.
Na izany na tsy izany, anio dia te-hizara aminareo izahay, na safidy tsy mihoatra na latsaky ny Modely brochure sy brochure an-tserasera 30 maimaim-poana Izy ireo dia tsy hanompo anao hampihatra azy ireo amin'ny tetikasanao manokana fa koa mba hahazoana doka aingam-panahy manan-danja na koa hitondra azy ireo ho toy ny fototra hanombohana mamolavola ny volavolantsika manokana. Araka ny hitanao dia misy endrika maro karazana ary tsy izy rehetra akory no natao hanarona ireo filan'ny fifandraisana. Tandremo ary mandania fotoana be dia be hisafidianana ny safidy mety indrindra amin'ny tetikasanao sy ny orinasanao. Tombano ny zavatra ilainao ary indrindra amin'ny fomba fijery tianao hampifantohana ny fampiroboroboana. Mikasa ny hampiditra angon-drakitra mifandraika amin'ny raharaham-barotra toy ny tantaran'ny niforonany ve ianao? Hamboarina amin'ny endrika santionan'ny vokatra sy serivisy ve ny endrika?
¿Qukarazana hierarchy inona no hatsanganao ary inona singa izay homenao lanja bebe kokoa ary noho izany dia fahitana lehibe kokoa ao anaty ny fifangaroanaon? Inona ny tsiro ao am-bavanao tianao ajanona ao amin'ny mpihaino anao ary ahoana no hataonao handresena lahatra sy hamporisihana azy ireo hikaroka fampahalalana bebe kokoa momba ny orinasanao? Ireto misy fanontaniana tokony hapetrakao amin'ny tenanao alohan'ny hidiranao miasa satria tsy mitovy ny firafitry ny sary sy ny maso arakaraka izay tanjona tadiavinao.
Amin'ity safidinay avelanay anao anio ity dia afaka mahita ianao endrika tsy azo tsapain-tanana sy ankehitriny izay maimaim-poana tanteraka ary ambonin'izany rehetra mora ny mampihatra sy manova mandra-pahitanao ny valiny tena tadiavina.
Sakafo ara-pahasalamana sy fomba fiaina mahasalama
Ohatra tsara amin'ny brochure minimalist ity. Diptych tena madio sy kanto izy io izay manome fampahalalana mifandraika amin'ny fomba fohy ary tsy mandà ny herin'ny sary. Araka ny hitanao dia mifantoka amin'ny orinasa ara-pahasalamana izy io, noho izany ny lokony dia vita amin'ny gradients malama sy ny fitambaran'ny vahaolana izay manondro ny natiora toy ny voasary, manga, volontany ary maitso.
Ny brochure mifandraika amin'ny tontolon'ny lamaody dia hanome fahitana lehibe an'ireo sary ary koa ny vokany. Ity môdely ity dia mety ho tena ilaina tokoa hanehoana ny tenanao raha te hifandray voalohany amin'ity karazana asa ity ianao.
Flyer orinasa ho an'ny orinasa
Ny sidina orinasa ho an'ny orinasa dia mirona any amin'ny vahaolana kanto sy be pitsiny amin'ny fampiasana minimalism ary indrindra ny endrika azo vakina sy milamina. Ny lohan-dahatsoratra na ny sisiny dia matetika misy sary mamorona ary tsotra misy bala.
Ny triptych farany indrindra dia manana vahaolana izay misy singa tsy mangarahara sy kaonteneram-baovao izay mandrafitra tsara ny fampahalalana ary mampisaraka azy avy any aoriana izay mazàna misy sary sy fiaviana izay matetika tsy mifantoka. Matetika izy ireo dia tsotra sy mora vakina.
Para orinasa sy tetikasa mifandraika amin'ny tontolon'ny fananganana Tena manintona tokoa ny milalao amin'ireo rafitra mafy sy mafy ary koa sary sy votoaty hita maso.
Ny menus ho an'ny trano fisakafoanana dia tokony ho ambony noho ny zava-drehetra satria namboarina mba ho referansa amin'ny fotoana ividianana na amin'ny mahasarika fisakafoanana vaovao. Noho io antony io dia zava-dehibe ny hanokanana faritra midadasika ho an'ny tsanganana amin'ny vokatra sy ny vidiny amin'ny endrika soratra. Ny vaovao dia tokony ho mora ny toerana.
Ao amin'ny sehatry ny famolavolana anatiny, ny fisongadinan'ny sary dia miharihary koa satria ny faritra midadasika amin'ny habakabaka dia tsy maintsy averina mamoaka sary lehibe izay ahafahana mankasitraka ireo nuances amin'ireo scenario.
Ny fomba fisaka dia mety ho manintona indrindra ho an'ireo orinasa izay misy ifandraisany tontolon'ny fialamboly sy ny teknolojia vaovao. Ny fampiasana sary dia mety hahatonga ny fahalalana ara-teknika saika filalaovana ary ny atin'ny ankizy vaoary mamorona sy misarika kokoa.
Katalaogy amin'ny akanjo
Amin'ny orinasa izay misy ifandraisany amin'ny clamba lamba Ilaina ny firafitry ny santionany, satria ny vokatra azon'ny mpanjifa vidiana sy ny lafiny omeny ny maodelin'izy ireo dia tsy maintsy aseho.
Brochure Trifold ho an'ny orinasa
BOKIKELY natao ho an'ny orinasa Izy ireo dia mazàna manana antom-piheverana lehibe kokoa amin'ny atiny an-tsoratra satria matetika izy ireo dia mihidy amin'ny angona toa ny tantaran'ny nananganana orinasa, ny soatoavina sy ny filozofia izay arahin'ity orinasa ity ary mazava ho azy ireo singa minimalista sy ny famaranana madio.
Brochure bi-fold ho an'ny fiara
Eto isika dia manana ohatra mahaliana iray momba ny diptych ho an'ny fiara: ao amin'io ampahany tsara amin'ny habaka io dia natokana ho amin'ny fampidirana ireo sarin'ireo fiara avy amin'ny fomba fijery samihafa, ireo mari-pamantarana fiara ary na ny sarintany aza.
Brochure an'ny orinasa diptych
Ity misy ohatra iray hafa manintona ary natao ho an'ny bokikely orinasa. Hitantsika eto fa mbola misy ny famolavolana fitaovana ary ny vahaolana geometrika dia afangaro amin'ny sary sy ny lahatsoratra.
Brochure fandraharahana volondavenona
Ho an'ny tontolon'ny orinasa ny vahaolana mahazatra indrindra dia mety ho safidy tsara ihany koa. Hitantsika eto ny firafitra iray mizara Tsanganana 3 ary miaraka am-pahalalana amin'ny fampahalalana an-tsoratra ary koa amin'ny tsy fahampian'ny singa haingon-trano.
Brochure aloha sy aoriana
Ity misy modely tsotra ho an'ny triptych amin'ny endrika PSD ary mety ho tena ilaina izany satria azo ampifanarahana amin'ny karazana vahaolana.
Bokikely fampiasa am-po roa heny
Misy ihany koa ireo safidy hafa mahazatra izay lavitra ny estetika matihanina izay afaka miasa tsara manaparitaka hafatra ary miarahaba anao amin'ny daty manokana toa an'i Valentine.
Indraindray ny vahaolana tsotra indrindra dia azo ampiasaina manaova fampisehoana vokatra na dia ilaina foana aza ny mampifanaraka ny loko misy loko amin'ny vahaolana orinasa.
Modely flyer orinasa
Ny sary izay hamidy ambonin'izy rehetra dia ilay an'ny matihanina sy fahamatorana, noho izany ny safidin'ny sary sy ny fiteny dia ho tena zava-dehibe.
Ireo bokikely izay tsy maintsy novolavolain'ireo orinasam-pizahan-tany dia tokony ho vonona hofenoina sarintany, drafitra ary sary ka nanapa-kevitra ny hanao diany dieny izao ny mpampiasa.
Safidy tsara ny fampiasana loko loko sy loko lehibe manasongadina lahatsoratra, hafatra ary logo. Ny loko mainty dia mety hahaliana tokoa na dia tokony hialana aza izany raha toa ka hanolotra fanangonana lahatsoratra marobe isika.
Brochure Shidler Trifold
Amin'ny faritra anatiny azonao atao milalao sary sy lohateny satria azon'izy ireo atao ny manazava tsara izay lazaintsika, na vokatra io na serivisy.
Brochure Flyer an'ny trano fisakafoanana
Ao amin'ny menus ho an'ny trano fisakafoanana na flyer, azontsika atao ny mampiditra sary natsofoka tao amin'ny tsanganana vidiny. Ny mpanjifa dia hanapa-kevitra ny handany vokatra be dia be raha toa ka aseho amin'ny sary fisakafoanana mahaliana izy ireo.
Modely amin'ny sakafo fisakafoanana
Amin'ny tranga hafa, indrindra amin'ny trano fisakafoanana avo lenta, ny vahaolana mety indrindra dia ny fampidirana sary famantarana sy taratasy fotsiny.
Bokikely efatra pejy
Na dia tsy fahita firy aza, dia azo amboarina amin'ny endrika a ny brochure katalaogy, indrindra rehefa mikasa ny hanao fanangonana vokatra matevina kokoa izahay.
PSD Flyer maimaim-poana
Manoro hevitra anao fa alohan'ny hidirantsika hiasa dia mazava ny momba ny loko orinasa. Amin'ny fotoana maro dia mila mampiasa loko faharoa na hafa amin'ny orinasa isika ary zava-dehibe ny fahalalantsika azy ireo hampifangaro azy ireo tsara.
Azontsika atao koa ny mampiasa sary amin'ny lohateny isaky ny tsanganana. Amin'izany no ahafahantsika mizara tsara sy mandrafitra ny vaovao.
Brochure PSD ho an'ny Flyers
Amin'ny alàlan'ny firafitra sy gradien dia azontsika atao omeo ny habetsahana sy ny fitarihana ny firafitra. Araka izany dia mazoto kokoa ny fizotry ny famakiana.
Flyer trano fisakafoanana style rustic
Ho an'ny orinasa maitso dia azontsika atao ny mampiasa a estetika ambonimbony kokoa miaraka amin'ny motif hazo na taratasy ary firafitra.
Flyers mazàna no refy kely noho izany dia ilaina ho antsika ny mahafantatra ny fomba filalaovana amin'ny habaka mba hahafahan'ny mpamaky mandray vaovao mora foana amin'ny indray mipi-maso.
Brochure trano fisakafoanana antitra
Ny estetika estetika dia afaka manampy tsiro sy fahamendrehana amin'ny bokikely fandraharahana sakafo sy fisakafoanana.
Brochure menio mahazatra
Mety ho hevitra tsara ihany koa ny filalaovana sary masina amin'ny sehatry ny matihanina sy ireo singa izay fantatra mivantana ary mifandraika amin'ny fihetsem-po sy hevitra tiana. Ity misy ohatra iray amin'ny menio mahazatra izay mifamatotra haingana amin'ny teny toy ny fianakaviana, ny fahakaikezana ary ny filaminana.
Raha aorian'ity fisafidianana mahafinaritra ity dia maniry bebe kokoa ianao na tsy nahavita nahita ny endrika izay mifanaraka indrindra amin'ny zavatra ilainao, Manoro hevitra anao aho mitsidika an'ity banky loharano ity ianao izay misy modely brochure orinasa maro hafa sy maro hafas fitaovana maimaim-poana tanteraka. Ity misy santionany kely amin'ny zavatra azonao jerena ao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Templates » Bokikely an-tserasera, modely brochure 30 maimaim-poana
Patricio rosero dia hoy izy:
Valiny tamin'i Patricio Rosero
Tongasoa eto @ Paola!
Dario Gonzalez David dia hoy izy:
zavatra tsara, misaotra
Valiny tamin'i Dario Gonzalez David
@Dario Gonzalez David tongasoa anao!
@Vivi Suárez misaotra Vivi! Hijery aho
Tongasoa eto an-trano ianao! : =) Miarahaba
Stampaprint dia hoy izy:
Fanangonana tena tsara. Ilaina ho an'ireo izay te-hanonta ny brochure hanana modely samihafa sy tany am-boalohany toa ireny. Hanoro azy ireo ny mpanjifako izay te-hanao ny fampiroboroboana fitaovana izy ireo. Mirary ny soa indrindra!
Valiny amin'ny Stampaprint
Fiarahabana Stampaprint! : =)
vicky avalos dia hoy izy:
Mamaly an'i vicky avalos
ENY, azo sintonina izy ireo René, iza amin'ireo no tsy tianao?
taratasy kely dia hoy izy:
endrika mahafinaritra, nataoko alaina ny iray amin'ireo volanao ary tiako ho anao azafady mba ampio aho
Ahoana no ahazoako an'io sary an-tsaina zava-misy omenao azy io amin'ny 3d, dia tena ilaina izany
misaotra betsaka, arahaba
Inona no atao hoe kayme?
oscar barrera dia hoy izy:
Misaotra betsaka indrindra ...
Valiny tamin'i Oscar Barrera
Tongasoa ianao ry Oscar!
Ahoana no fanitsiana azy ireo?
Azonao atao ny manova azy ireo mba hahafahan'izy ireo mampiavaka azy ireo Victor
Misaotra nizara an'ity fitaovana ity
Rafael garcia dia hoy izy:
Ny modely tena tsara dia tena manampy betsaka misaotra
Valiny tamin'i Rafael Garcia
Salama namana, ahoana no fisintomana azy ireo dia nanandrana aho fa tsy fantatro ny fomba? mba ampio.
Mamaly an'i anita
Ivis Ramos dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, azafady azafady mba manana modely handrafetana flyer… Manomboka amin'ity fitaovana ity aho ary mahaliana ny fananana ity galeria ity… Raha tsara fanahy ianao… Misaotra…
Valiny tamin'i Ivis Ramos